MADAXWEYNAHA BURUNDI OO KU HANJABAY INUU LA DAGAALAMI DOONO CIIDAMADA MIDOWGA AFRIKA, HADDII DALKIISA LA KEENO - iftineducation.com
MADAXWEYNAHA BURUNDI OO KU HANJABAY INUU LA DAGAALAMI DOONO CIIDAMADA MIDOWGA AFRIKA, HADDII DALKIISA LA KEENO
iftineducation.com – Pierre Nkurunziza, Madadaxweynaha Burundi, ayaa wuxuu markii ugu horeysay uu shaaca ka qaaday inay la dagaalami doonaan, haddii dalkaasi la keeno ciidan ka socda Midowga Afrika.
Wadamada Midowga Afrika, ayaa ku hawlan, sidii shan kun oo askari ay ugu diri lahaayen Caasimadda Burundi ee Magaalada Bujumbura, si ay kaga hortaggaan rabshado ku dhex mara Ciidamada Dowladda iyo mucaaradka.
Madaxweynaha oo maanta ka hadlaayay Radiyaha Dowladda, ayaa wuxuu sheegay inaysan marnaba aqbali karin in dalkiisa lagu soo duulo, isla-markaana ay Burundi tahay dal xor ah oo madax banaan.
Waxa uu soo hadalqaaday kulankii Golaha Ammaanka Qaramada Midoobe ee ka dhacay Magaalada New York, inaanan laga soo saarin in ciidan ka socdo Midowga Afrika la geeyo Burundi.
Waxa uu Midowga Afrika uu ugu baaqay inaanay qaadin tallaabo ka horeysa Golaha Ammaanka, haddii kalana ay u fasiran doonaan in lagu soo duulay dalka Burundi, qof kastana uu qoriga u qaadan doono, sidii uu kula dagaalami lahaa.
Dastuurka Burundi wuxuu qorayaa in dalkaasi ciidan la keeni karo marka ay codsadaan laba dhinac marka ay dagaalamayaan iyo marka aanay dalka ka jirin dowlad shaqaynaysa.
Belguim oo joojisay xafladii Sanadka-cusub ee Brussels arrimo Amni awgood